YAANYADA KORDHAY EE WINDOWSILL EE AQALKA: DARYEELKA SAXDA AH EE GURIGA, TIKNOOLAJIYADA A ILAA Z, SIDA LOO ABUURO QOLKA QOLKA DHERIGA DAAQADA? - BEER CAGAARAN
Technology of yaanyada sii kordhaya on windowsill. Tilmaamaha A ilaa Z
Si joogta ah u isticmaalida yaanyada dabiiciga ah ee koray adiga keligaa ma adkaato, xitaa haddii aysan jirin dhul beerashada. Waa suurtagal in la beero tamaandhada daaqadaha, sababtoo ah taasi waxay ku habboon tahay in la fiiriyo qodobbada qaarkood.
Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa haddii ay suurtagal tahay in uu kobciyo yaanyada daaqada guriga, sida loo doorto yaanyo kala duwan, meel, sida loo beero yaanyada, geedo iyo miraha, sida biyaha iyo bacriminta, gooyaan iyo jiido, iyo cudurrada iyo cayayaanka ay halis gelin karaan yaanyada gudaha.
Ma dhali karaa yaanyada daaqada sii koraya ee guriga?
Shaqada doorashada ayaa socota oo natiijadooduna waxay noqotey noocyo kala duwan oo isku dhafan oo tamaandho ah, oo ku habboon koritaanka dheriga ubaxa. Waxa ay ku kala duwan yihiin aan qabyo ahayn iyo dhalid.
Faa'iido weyn oo ah beerashada noocan oo kale ah waa sanadka oo dhan, isagoo ogaanaya wakhtiga Bisaylkiisa, waxaad si fudud u heli kartaa dalag xilli yar oo keliya miiska sanadka Cusub. Waxa ugu muhiimsan - inaad doorato darajada saxda ah.
Dhibaatooyinka beeritaanka noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa in loo aaneyn karo beerashada xadidan, gaar ahaan haddii daaqada gurigeeda aysan daboolneyn, dabcan, wax soo saarka gurigu wuxuu ku kala duwanaan doonaa kuwa ka soo go'ay dhirta dhulka.
Hawlaha diyaarinta: si habboon u koraya
Sida loo doorto meel
Wax dhib ah oo ka yimaada dhinaca daaqada, waxaad weli ka heli kartaa goosashada. Bacriminta, loogu talagalay beerista daaqadaha daaqada, waxay ku habboon yihiin maalin gaaban oo iftiin ah iyo la'aanta qoraxda.
Tamaandhirku waa geedka kulaylka jecel, sidaas awgeed heerkulka u dhow duurka waa in lagu hayaa + 22-25 digrii inta lagu jiro maalinta oo aan ka yareynin +15 digrii fiidkii. Sidoo kale dalbashada yaanyada qoyaanka. Gaar ahaan leh kala duwanaanta jiilaalka ee beerashada, marka radiators ee kululaynta qalalan hawada aad u badan, kaas oo keeni kara cudur ah ee warshadda. Hawada gudaha waa in si joogto ah loo nadiifiyaa.
Sariiraha daaqada, noocyada caadiga ah iyo dhoobada ayaa ku haboon.. Dhirta noocan ah ee dhererka kama badna 35-45 sentimitir. Fursadaha ugu sarreeya:
Waxay caan ku tahay noocyo cufan, ma koraan kor ilaa shan iyo toban sintimitir. Miraha waa macaan - hurdi ama casaan, miisaankoodu aanu ka badneyn laba iyo toban garaam. Xaaladda caafimaad ee geedka ayaa gabi ahaanba ka madaxbannaan dherarka iftiinka.
Bush waa iswaafajin, miro waa macaan, wareega, oo culeys ah labaatan garaam. Haddii aad abuurto miraha ka dib labaatanaad ee bisha Sebtember, goosashada ugu horreysa waxaa lagu soo ururin karaa Sannadka Cusub.
Kala duwanaanta hore, dhirta isweydaarsiga leh, 30-40 cm dherer ah, ma ahan xargaha, miraha waa casaan, wareeg ah.
Waa muhiim! Yaanyada la kariyey waxay awoodaan in ay midho dhasho shan sano, si tartiib tartiib ah u yareeyaan xoogga. Kalluunku wuxuu udhaqaaqaa sida ugu macquulsan labada ama saddexda sano ee hore.
Wixii beerista ee yaanyada yaryar waa dheriga ubaxa caadiga ah ee ku habboonka sameysan caag. Doorashada dhexroorka aad u baahan tahay inaad diirada saarto cabbirka geedka qaangaarka ah.
Wixii beeritaanka yaanyo potted ku habboon sida substrate diyaargarow, iyo isku dar ah ciidda, naftaada karsan. Tani waxay u baahan doontaa:
Chernozem - 45%;
ciid - 5%;
Sida loo beero guriga: tiknooloojiyada laga bilaabo A ilaa Z
Waxyaabaha lagu beero waxa si fiican loogu iibsaday dukaanka si ay ugu kalsoonaadaan tayada iyo u hoggaansamida astaamaha soo koobay.
Ka hor inta beerto, waa lagama maarmaan in la kala saaro kernels madhan oo aan awood u lahayn in ay dhalaan. Si taas loo sameeyo, waxay u baahan yihiin in la yareeyo biyo milix ah toban daqiiqo iyo miraha aan caadiga ahayn ayaa ku faafi doona, halka kuwa caafimaad qaba ay hoos ugu dhigi doonaan hoos.
Marka xigta, miraha waxaa lagu qooyay nus saac gudahood xalka aaladda potassium si ay u horumariso difaaca jirka ilaa dhirta mustaqbalka dhirta mustaqbalka.
Kadib dhammaan geedi socodka, miraha waxaa lagu dhejiyaa maro qoyan.
Ka dib markii uu sprouts muuqday, abuur ah lagu beeray dhulka, qoto dheer oo dherer ah, kormeerka mudo ah saddex sintimitir.
Xayawaanku si khafiif ah ayuu u tamped, weelka waxaa lagu daboolay caag balaastik ah oo lagu nadiifiyaa meel diiran ilaa biqilka. Filimka waxaad u baahan tahay inaad ka sameyso godad yar oo wareega hawada.
Toddobaadkii, caleemaha ayaa soo baxaya. Waa lagama maarmaan in la hubiyo in ciidda had iyo jeer dhexdhexaad ah qoyaan.
Geedo of yaanyada ku quusiyaan wajiga of laba caleemo run.
Si looga dhigo mid sahlan in la kala sooco iyada oo aan waxyeello lahayn, waraabinta waxaa la joojiyaa laba maalmood ka hor intaan la qaadan.
Si taxadar leh u dhirbaaxo leh biiyaha dabiiciga ah oo ay la socoto qoryaha dhulka hoostiisa, waxaa loo wareejiyaa weel cusub oo ciid ah si ay asal u ahaadaan dhulka.
Carrabkuna wax yar ayaa is dulfuulaya oo ku daadi biyo diirran.
Bishi, inta lagu jiro taas oo geedo u baahan yihiin in la quudiyo bacriminta macdanta, geedo waaweyn oo la koray ayaa loo tarxiilay meel joogto ah by habka transshipment.
Dhirta cayayaanka waxaa lagu beeray mid ka mid ah dheryaha kala duwan.
Ka dib markii uu soo dego, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka +18 +20 digrii iyo ka hortagga soo-gaadhista qorraxda tooska ah.
Tilmaamaha tallaabo tallaabada ah ee loogu talagalay ilaalinta dhaqanka qolka
Yaanyada la kariyay ayaa aad ugu mahadcelinayaan waraabka. Nadaafadda carrada ayaa ka qaybqaata koritaanka caafimaad, abuuritaanka saaxiibtinimo ee ugxan iyo daaqa miraha. Waraabinta waxaa la sameeyaa laba jeer toddobaadkii, iyada oo aan taabashada afkoda. By bilowga ubax, waraabinta waa la joojiyaa oo dib u bilaabo kaliya muuqaalka ah ee ugxan.
Seddex wiig ka dib markii la soo qaaday, bacriminta macdanta gaarka ah ayaa la dalbadaa markii ugu horeysay. Cunto yaanyada waxay ubaahan tahay dhexdhaxaad laba toddobaad ah, samaynta bacriminta maalinta labaad ka dib waraabinta.
Xoqin iyo jiido, pasynkovanie
U hubso inaad ka saarto caleemahasameeyay in axils of caleemaha, taas oo ah, pasynkovanie. Waxay lagama maarmaan u tahay abuuritaanka haboon ee warshadda. Marna lama tirtirin, tallaabooyinku waxay keenaan in ay adkeeyaan, qaataan nafaqooyinka ayna yareeyaan dhalidda ee yaanyada.
Caawimaad! Ka dib markii ugxansiisyada ugu weyn ay sameeyeen, waxaad u baahan tahay inaad sare u qaaddo dusha sare, oo aad jarjartid caleemaha hoose, kuwaas oo ku qalajiyay geeddi-socodka koritaanka.
Noocyada ku habboon beerista daaqadaha, ma jiro wax laamo ah, waxay leeyihiin meelo xasilloon, sidaas darteed uma baahna garaf. Haddii, si kastaba ha noqotee, baahidaas oo kale ayaa keentay, ka dibna godka ayaa si adag u xoqaya dhulka, si uusan u waxyeeleynin xididada, iyo laamaha ku xiran.
Dheecaan danbe - Cudurka fungal waxaa lagu kala qaadaa hawada, carrada, iyada oo loo marayo miraha iyo harta dhirta. Astaamaha - dhibco madow oo caleemo ah, oo leh waqti u gudbaya afkoda iyo miraha. Awood u leh inuu si buuxda u baabbi'iyo dalagga. For prophylaxis, habka of qallaji abuurka ee daloolka potassium waxaa loo isticmaalaa marxaladda biqilka, waxaa sidoo kale suurto gal ah in lagu daaweeyo dhirta dhalinyarada leh dareeraha Bordeaux.
Lugta madow - Cudurka fungal oo ay sababto beeritaanka dhererka iyo la'aanta iftiinka. Saldhigga asliga ah ee madow waxay u egtahay madow, dhirtu waxay u nugul yihiin, dhaca waxayna u dhintaan. Ujeedooyinka ka hortagga, carrada waxaa lagu hodanayaa ash iyo ciid. Haddii uu cudurku mar hore ku jiro marxaladda firfircoon, daaweynta waxaa lagu sameeyaa daawooyinka fungicidal.
Septoria- cudurku wuxuu ku dhacaa ciidda. Caleemaha hoose ee geedka waxaa lagu daboolay dhibco miro leh dhibco madow, ka dibna caleemaha waxay soo noqdaan bunni iyo qallalan. Ka-hortagga - sun-saaridda ee carrada leh daloolka potassium, qaybaha ay saameeyeen waa la burburiyey, iyo daaweynta waxaa lagu fuliyaa daaweynta bordeaux.
Goobta Brown - dhibco cawlan ee caleemaha on caleemaha, sababta keentay taas oo kor u qaada qoyaan iyo ciidda qulqulka. Daaweyntu waxay la mid tahay septalia.
White fly - Cayayaanka yaryar ayaa nuugaya caleemo cufan oo isku mid ah. Waxay u taagan tahay hanjabaad sida cudur-sidaha. Ku darida qadar ku filan oo nafaqo ah ayaa wax ku biirinaysa caabbinta, iyo cayayaanka horey u soo muuqday, iyo dirxiintooda waxaa lagu dhaqi karaa caleemaha biyo saabuun leh ama faleebo london.
Thrips - Cayayaanka, raadadka nolosha oo muujinaysa qaab qalalan, caleemo dhicid iyo burooyinkeeda qallalan. Dagaalku wuxuu ka kooban yahay biyo ku filan iyo daaweyn cayayaanka.
Yaanyada kordhay ee daaqadaha ayaa ah fursad ay ku ururiyaan midhaha miraha udgoon, ma aha oo kaliya guga ama xagaaga, laakiin sanadka oo dhan. Tani waa waxqabad xiiso leh oo farxad weyn u leh kuwa xitaa marka hore ka fekerayay mawduuca beerta. Ka dib markaad akhrisid maqaalkan, waxaad baratay markaad beeranaysid yaanyada iyo noocyada kala duwan ee lagu dooranayo goosashada munaasibka ah.